Mustafe Cagjar “Carada Farmaajo loo qabo yaan Abiy Axmed lagula dhicin” – CNN SOMALI
Mustafe Cagjar “Carada Farmaajo loo qabo yaan Abiy Axmed lagula dhicin”
Djbouti (CNN SOMALI) Madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaali Galbeed Mudane Mustafe Muxumed Cumar Cagjar oo dalka Jabuuti uga qeyb galay Shirka Madasha Aragti-Wadaagga ee Machadka Heritage ayaa si qota dheer uga hadlay arrimaha siyaasadda ee Soomaaliya iyo Itoobiya.
Madaxweyne Cagjar ayaa sheegay in laga haboon yahay in dadka Soomaaliyeed ee mucaaradka ku ah Madaxweyne Farmaajo ay la coloobaan Ra’iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed oo Farmaajo saaxiib la ah.
Sababta waxa uu ku sheegay in Soomaaliya ay ka nabad gashay faro-gelintii Itoobiya intii uu xukunka joogay Ra’iisul wasaare Abiy Axmed oo sidoo kale hadda dagaal kula jira kooxdii Soomaaliya kala qeybineysay mudo 27 sano ah.
Waxa uu sheegay in qowmiyadaha kale ee dalka Itoobiya ay wax ka tirsan karaan Abiy Axmed, balse Soomaalidu ay ka nabad gashay, isagoo xusay in la buun-buuniyo dacaayado la xariira qorshaha Abiy uu mustaqbalka ka damacsan yahay Soomaaliya.
“Seddax sano iyo barkii u dambeeyey in Abiy dhaho waxaan la shaqeynayaa dowladda dhexe, waa wixii ay Soomaaliya dalbaneysay mudo 30 sano ah, faro-gelintii iyo hubeyntii in laga joojiyo waa ku saxan yahay, ujeedada uu ka leeyahay anaga waxaba nagama gelin,” ayuu yiri Mustafe Cagjar.
Sidoo kale Madaxweyne Mustafe waxa uu qiray in hadii ay yihiin Soomaalida hoos tagta Itoobiya ay dhibaato badan u geysan jireen dadka kale ee Soomaaliyeed, isagoo taas u tiiriyey xukunkii hore ee Itoobiya ka jiray.
Midowga Musharaxiinta mucaaradka ma waxey u dhaqaaqeen jihadii dagaalka?
Weerar cusub oo ku billowday Ra’iisul Wasaare Rooble kadib tallaabo uu qaaday
Kulan qarsoodi ah oo Villa Somalia ku dhex maray Farmaajo iyo Cumar C/rashiid